...tti maxxanfame 9:10 7 Sadaasa 20219:10 7 Sadaasa 2021
Finfineetti namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman mootummaa deeggaruun hiriira bahan
Jiraattoonni magaalaa Finfinnee kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa guddoo biyyattii, Finfinneetti bahuun, motummaa federaalaa kan kaaba biyyatiitti gareewwan finciltootaatiin wal waraanaa jiruuf deeggarsa isaanii mul'isan.
...tti maxxanfame 9:46 26 Onkololeessa 20219:46 26 Onkololeessa 2021
Kongaransiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n ibsa Onkololeessa 15 bara 2021 baaseen rakkoo siyaasaa biyyattiin amma keessa jirtuuf mariin biyyoolessaa 'haqa qabeessaa, dhugaafi hunda hirmaachise' qofatu furmaata jedhe.
...tti maxxanfame 17:10 28 Fuulbaana 202117:10 28 Fuulbaana 2021
Kantiibaa bulchiinsa magalaa Finfinnee ta'uun kan muudaman Aadde Adaanech Abeebee miseensota paartilee mormitootaa kan IZEMA fi ABIN dabalatee mana maree bulchiinsa magaalichaaf dhiyeessuun kaabineewwan 26 ta'aniif muudama kennaniiru.
...tti maxxanfame 4:54 23 Hagayya 20214:54 23 Hagayya 2021
Dhuguma Itoophiyaan daandii qaxxaamuraa irratti argamtii?
Waraanni naannoo Tigraay keessatti jalqabee gara naannolee ollaatti babal'ate namoota kumaatamaan lakkaa'aman akka du'aniifi miliyootaan kan lakkaa'aman ammoo baqachuuf dirqamaniiru.
...tti maxxanfame 12:22 28 Adooleessa 202112:22 28 Adooleessa 2021
...tti maxxanfame 4:58 29 Waxabajjii 20214:58 29 Waxabajjii 2021
Humnootiin TPLF baatii saddeet booda Maqalee to'atan
Humnootiin TPLF magaalaa guddoo NaannooTigraay Maqalee to'achuufi ummanni daandiitti bahuun gammachusaanii ibsaa jiraachu maddeen qabatamoo ta'an BBCf mirkanneessan.
...tti maxxanfame 11:07 11 Waxabajjii 202111:07 11 Waxabajjii 2021
Ministirri Dhimma Alaa Chaayinaa Waang Yii, gocha dhimma keessaa Itoophiyaa keessa seenuu biyyi isaanii akka mormitu ibsuu miidiyaan mootummaa biyyattii gabaase.
...tti maxxanfame 3:07 15 Bitooteessa 20213:07 15 Bitooteessa 2021
Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa adeemsisuuf qophiirra jirti. Yeroo amma Boordiin Filannoo sagantaa qabateen yeroon paartileen siyaasaa kaadhimamaa itti galmeessan xumurameera
...tti maxxanfame 6:43 1 Bitooteessa 20216:43 1 Bitooteessa 2021
Itoophiyaan A.L.I Caamsaa 28 fi Waxabajji 5 bara 2013 filannoo biyyaalessaa gochuuf guyyaa qabattee jirti. Filannoon kun kan kanaan dura gaggeeffamanirraa adda ta'uu danda'aa?
...tti maxxanfame 12:31 14 Amajjii 202112:31 14 Amajjii 2021
Page 1 Keessaa 20